Levitra | June 2022
Tena > Levitra
ohatrinona ny tadiny
Ohatrinona ny grava - mitady vahaolana
Mendrika handoavana ny tsiranoka ve ianao? Raha ny fandehany dia voaporofo fa tena mendrika izany ny fihaonamben'i Strava. Ankehitriny rehefa fantatro izay fiasa tsy tafiditra ao amin'ny kinova mahazatra, dia tsy mino aho hoe afaka mahafoy ny famandrihako premium. Ny endri-javatra fampiasako be mpampiasa indrindra dia ny hetsika ampiarahina, ny log de ligne, ary ny GAP.
fizarana mivantana mivantana
Segment mivantana Strava - vahaolana amin'ny
Miasa amin'ny fihazakazahana ve ny fizarana mivantana amin'ny tsiranoka? Ny fizarana Segments mivantana dia tsy misy afa-tsy amin'ny hetsika atao amin'ny hazakazaka sy mitaingina. Karazana fizarana roa no hampiasaina mandritra ny fiainanao Segments mivantana: malaza sy kintana.24. 2021.
mpanara-maso ny tahan'ny fony
Fanaraha-maso ny tahan'ny fo Strava - vahaolana vaovao
Iza amin'ireo mpanara-maso ny tahan'ny fo no miasa amin'ny tavy? Strava dia mifanaraka amin'ireo fitaovana GPS marobe izay mirakitra ny angon-drakitra fo, toy ny Garmin, Fitbit, Apple Watch, Wahoo, Polar, ary Suunto, ary TomTom.17 2021.
Fitsarana maimaimpoana an'i Strava - valiny amin'ireo olana
Mandra-pahoviana ny andrana maimaimpoana amin'ny grava? mandritra ny 60 andro
Strava military - vahaolana azo tanterahina
Afaka mampiasa an'i Strava ve ny miaramila? Ny heatmap Strava koa dia maneho ny hetsika ampiasain'ny mpampiasa nandritra ny taona maro hatramin'ny septambra 2017. Midika izany fa tsy misy olona afaka mampiasa azy io hanarahana ireo fisafoana miaramila na mpandalina mandalo ny tobin'ny CIA amin'ny fotoana tena izy.
zotra mahita lalana
Mahita zotra Strava - vahaolana pragmatika
Ahoana no fomba hijerena ireo zotra amin'ny desktop desktop? Avy eo, sokafy i Strava ary kitiho ny bokotra 'Fikarohana' eo ambany, avy eo paompy 'Browse Routes'. Hanokatra pejy iray izay hanomboka hisaintsaina ny fiainana mandritra ny segondra vitsy, haneho anao ny fahitana an'izao tontolo izao. Segondra vitsy taty aoriana dia hiverina miaraka amin'ny làlana telo izy io, mifototra amin'ny masontsivana default amin'ny tampon'ny pejy.23.03.2020
Sarintany hafanana manerantany
Sarintany hafanana manerantany - vahaolana azo ampiharina
Inona ny Heatmap manerantany ao amin'ny Strava? The Global Heatmap Ny heatmap dia mampiseho ny 'hafanana' namboarin'ireo hetsi-bahoaka, nihaona tamin'ny taon-dasa. Ny heatmap dia havaozina isam-bolana. Tsy hita ny hetsika asian'ireo atleta ho tsy miankina. Ireo atleta dia mety misafidy amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny toe-piainany manokana. Ireo faritra tsy dia mihetsika firy dia mety tsy mampiseho 'hafanana'.
marina ve ny tsipika
Ahoana ny mahamarina ny tsipika - mitady vahaolana
Fa maninona no tsy marina be ny tadiny? Ny fitaovana ampiasainao dia mety very fifandraisana tsotra fotsiny amin'ireo satelita GPS ary tsy nanoratra data. Ny hetsika Strava mety ho tsy misy saritany, mampiseho tsipika mahitsy mampifandray ny teboka fanombohana sy ny fiafaranao na notondroina ho toy ny hetsika anaty trano. Ny fitaovanao dia mety nandrakitra teboka GPS izay mivaona amin'ny làlanao marina. 24. 2021.
angano eo an-toerana
Angano ao an-toerana Strava - vahaolana maharitra
Inona no dikan'ny hoe angano eo an-toerana ao amin'ny Strava? Ny zava-bita Local Legend (LCL) dia omena ny atleta izay mahavita ampahany iray omena indrindra mandritra ny 90 andro mihodinkodina na eo aza ny hafainganana na ny hafainganana.
Sarintanin'i Strava - mety vahaolana
Manana sarintany ve ny tavy? Strava dia manome sarintany roa hijerena ireo hetsika nataonao tao amin'ny tranokala Strava: Standard sy Satellite. Ny sary zanabolana dia nalaina avy tamin'ny DigitalGlobe, NASA, ary Mapbox. Ny sarintany mifandray amin'ny fampiharana Strava dia mampiasa Google Maps sy Apple Maps ho an'ny fampiharana Android sy iOS tsirairay avy. 20 2021.
endri-javatra premium Strava
Endri-javatra premium Strava - valiny sy fanontaniana mahazatra
Inona no maha samy hafa ny Strava maimaim-poana sy ny premium? Strava dia manana kinova maimaimpoana sy karama, ny dikan-karama, Strava Summit, manome anao fidirana amin'ny endri-javatra maro kokoa. Strava Summit dia mitentina $ 5,00 isam-bolana, na $ 59,99 isan-taona. Ny kinova maimaim-poana an'ny Strava dia manolotra fanaraha-maso hetsika, fahana amin'ny haino aman-jery sosialy, ny fahaizana mahita hetsika ara-pahasalamana eo an-toerana, sy ny maro hafa.1. 2020.
fitaovana hafa mifanentana
Fitaovana mifanaraka amin'ny Strava - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Fampiharana inona avy no mifandrindra amin'ny tadin'ny? Mampakatra na mandrindra ny tranokala fanatanjahan-tena hafa mankany StravaGarmin Connect.MapMyRun.MapMyRide.Runkeeper.3
Strava gap - vahaolana azo ampiharina
Inona no nanjo an'i Gap tany Strava? Toa nanala endrika hafa ho an'ny mpampiasa tsy mandoa vola ny STRAVA satria mazava fa misy ny fanosehana hahazoana bebe kokoa amintsika hanohana ara-bola ny serivisy STRAVA (mety) fahaverezana.7. 2020.
sokajy fiakarana hazavana
Sokajy fiakarana Strava - ny fomba hahatratrarana
Inona avy ireo sokajy fiakarana? Sokajy 4: fiakarana 250 ka hatramin'ny 500 metatra ho an'ny tombony amin'ny haavony. Sokajy 3: fiakarana 500 ka hatramin'ny 1,500 metatra amin'ny tombam-bidy ambony. amin'ny fahazoana avo.
Hetsika saina Strava - vahaolana maharitra
Inona no mitranga rehefa manisy saina ny hetsika miovaova ianao? Raha efa nasiana saina ny asanao dia midika izany fa ny asanao dia fantatra fa mety hanitsakitsaka ny torolàlana ho an'ny fizarana segondra na amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso auto na atleta Strava hafa. Ny hetsika vita amin'ny sainam-pirenena dia tsy hiseho eo amin'ny takelaka fizarana. 28. 2021.
heatmap an'ny olona manokana
Heatmap an'ny Strava manokana - ahoana no hamahana izany
Inona ny tsipika heatmap?
Tenifototra Strava - boky torolalana feno
Miasa ao amin'ny Strava ve ny tenifototra? Mila manam-paharetana ianao. Tsy toy ny mediana sosialy hafa, ao amin'ny Strava, tsy afaka manome tenifototra sy manantena mpanaraka bebe kokoa ianao; tsy misy Strava-bots any.
Leaderboard Strava - ny fomba hiatrehana
Ahoana no fahitako ny tabilao mitarika ao amin'ny Strava? Jereo ny pejy famisavisana ilay rakitra ho an'ny fampahalalana fanampiny.
Strava vs mapmyride - ahoana no hamahana azy
Azoko atao ve ny mampiasa Strava sy MapMyRide amin'ny fotoana iray? Raha hamindra ny hetsikao avy amin'ny MapMyRide mankany Strava, mila manondrana hetsika tsirairay avy amin'ny MapMyRide ianao ary mampakatra azy ireo any Strava avy amin'ny pejinay mampakatra. Mandehana amin'ny hetsika amin'ny MapMyRide. FANAMARIHANA: ny rakitra dia azo ampidirina betsaka ao amin'ny Strava ao anaty vondrona hatramin'ny 25.
Làlan'ny Strava - ahoana no fomba fiasa
Iza no tsara kokoa Strava na Komoot? Ilay atleta izay mitady fampitahana amin'ny hafa sy ny fifaninanana dia azo antoka fa tsara kokoa ao Strava. Komoot dia ampiasaina amin'ny fifanakalozana eo amin'ny fiaraha-monina sy ho aingam-panahy rehefa manomana làlana